Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. यो साउथ इन्डियन सिनेमा होइन, कर्नाटका र मध्यप्रदेशको राजनीति पनि होइन – Emountain TV
यो साउथ इन्डियन सिनेमा होइन, कर्नाटका र मध्यप्रदेशको राजनीति पनि होइन
काठमाडौं, १२ वैशाख । ०४८ को पहिलो आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाएर पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण ०५१ मै देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लगे । मध्यावधिबाट तत्कालीन एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो, अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने । उनले नौ महिना सरकार चलाउन नपाउँदै कांग्रेस र तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाले । राप्रपाकै सहयोगमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
‘खासमा यहीँबाट सुरु भएको हो देशमा संसदीय विकृति । सांसद खरिद–बिक्री, होटेलमा सांसद राखेर सुरासुन्दरी काण्ड मच्चाउनेदेखि विदेश पठाउनेसम्मको जग यहीँबाट तयार भएको हो,’ त्यतिखेर संसद् र राजनीतिक रिपोर्टिङ गर्ने अहिलेको खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँलेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
देउवा सरकार बनेपछि सरकार बनाउन र ढाल्न हदैसम्मका खेलहरू हुन थाले । सांसदहरूलाई सुरासुन्दरी व्यवस्था गर्नेदेखि किनबेच गर्नेसम्मका खेलहरू भए । सत्तारुढ दलका सांसद सरकारको विपक्षमा उभिने मात्रै होइन, सदनमा मन्त्रीहरू नै सरकारको राजीनामा माग्दै विपक्षी बेन्चमा बस्नेसम्मका खेल देखिए ।
राप्रपा, सद्भावना र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले सरकार बचाउन उस्तै खेल खेलिरहेका थिए । उनले सरकार जोगाउन राप्रपाका केही सांसदलाई बैंकक पठाएर आफ्नोविरुद्ध बहुमत पुग्न दिएनन् । राप्रपाका खोभारी राय, बुद्धिमान तामाङ, विष्णुविक्रम थापासहितका सांसदलाई उनले बैंकक पठाएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, देउवा सरकारविरुद्ध तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसकै एउटा खेमाले सघायो । मतदानको समयमा सुशील कोइरालाको निर्देशनमा कांग्रेसका दुई सांसद नाटकीय रूपमा अनुपस्थित भएपछि देउवा सरकार ढल्यो ।
आफ्नै सांसदले धोखा दिएपछि देउवा सरकार ढल्यो । र, तत्कालीन एमालेको सहयोगमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द ०५३ फागुनमा प्रधानमन्त्री बने । एमाले नेता वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने । चन्द नेतृत्वको सरकार बनाउँदा पनि संसदीय विकृतिको चरम अभ्यास गरियो । तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा राप्रपा र एमालेका केही सांसदलाई कुपण्डोलस्थित समिट होटेलमा राखियो ‘सबै सुविधा’ दिएर । होटेलबाहिर एमालेको भ्रातृ संगठन तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघका युवाहरूले प्रहरीझँै पहरा दिए, कुनै सांसदलाई बाहिर जान दिएनन् । नेताहरूको निर्देशनमा सांसदहरूलाई सुरासुन्दरीको व्यवस्था गरेको केशव स्थापितले स्वयम् बताउँदै आएका छन् । होटलबाट सांसदहरूलाई एमालेको कार्यालय बल्खुमा पनि लगेर राखिएको थियो ।
होटेलभित्र कतिसम्म अश्लील गतिविधि भयो भने तत्कालीन राप्रपाका वृद्ध नेता जोगमेहर श्रेष्ठले समेत गम्भीर आपत्ति जनाए । यही विषयमा तत्कालीन एमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीसँग त उनको झन्डै हात हालाहाल नै भयो । श्रेष्ठको विरोधपछि एमालेले आफ्ना सांसदलाई बल्खुस्थित पार्टी कार्यालयमा लगेर थुन्यो । त्यहाँ पनि प्ररायु संघले नै सांसदहरूलाई पहरा दियो । पार्टी कार्यालयमा समेत टिभी जडान गरेर अश्लील सिनेमा देखाइएको आरोप सांसदहरूले नै लगाए ।
यति खेल गरेपछि एमाले र चन्द समूहको सरकार बन्यो र सरकार बनेपछि खेल रोकिएन । कांग्रेसको साथ लिएर चन्द नेतृत्वको सरकार ढाल्न राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा नै सक्रिय भए । सरकारमा मन्त्री रहेका कमल थापा र रवीन्द्रनाथ शर्मासमेत त्यसमा सहभागी भए । संसद्मा कतिसम्म निर्लज्ज ताल देखियो भने बहालवाला मन्त्री थापा र शर्मा विपक्षी बेन्चमा बसेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्दले संसद्मा आफ्नै मन्त्री कमल थापाप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘मेरो जहाजमा आफ्नै मुसाहरूले प्वाल पारे ।’ यो घटना संसदीय इतिहासमा ‘मुसा–प्रवृत्ति’ भनेर चर्चित छ ।
सरकार बनाउन र भत्काउन गरिने यस्ता निकृष्ट र विकृत अनुभवबाट सिक्दै नेपाली संसदीय प्रक्रिया यहाँसम्म आइपुगेको थियो । तर, सरकारले अहिले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले फेरि पुरानै ठाउँमा पु¥याएको छ ।
‘५० को दशकको विकृत राजनीतिले संसदीय प्रणालीलाई जति बदनाम र अपमानित गराएको थियो त्यसलाई यति चाँडै बिर्सनुहुँदैनथ्यो । विगतका यस्ता घटना पाठ हुनुपथ्र्यो, तर सरकारले चिहान उधिन्ने काम ग¥यो । पछिल्लोपटक ल्याइएको अध्यादेशले त्यही झल्को दिन्छ,’ सम्पादक गाउँलेले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
तेस्रो मुलुकमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय
भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति नेपाली सेनाको आपत्ती
राष्ट्रपतिद्वारा २४१ जना कैदीको सजाय मिनाहा
संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच फुट ल्याउने चलखेल शुरु